एकैछिन अगाडी संगै बसेको छोरा घरमा आगलागी हुँदा तड्पि`र जलेको हेर्न बाध्य भए आमा बाबु, हेर्दाहेर्दै १५ वर्षीय छोरा समि रले संसार छो डे ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/एकैछिन अगाडी संगै बसेको छोरा घरमा आगलागी हुँदा तड्पि`र जलेको हेर्न बाध्य भए आमा बाबु, हेर्दाहेर्दै १५ वर्षीय छोरा समि रले संसार छो डे !
एकैछिन अगाडी संगै बसेको छोरा घरमा आगलागी हुँदा तड्पि`र जलेको हेर्न बाध्य भए आमा बाबु, हेर्दाहेर्दै १५ वर्षीय छोरा समि रले संसार छो डे !
गुल्मीको चन्द्रकोटमा किराना पसलमा आगलागी हुँदा एक जनाको नि`धन भएको छ। चन्द्रकोट गाउँपालिका–४ शान्तिपुरको बसपार्कमा रहेको खनाल स्टोर्समा आगलागी हुँदा पसल सञ्चामलक पूर्ण खनालका छोरा १५ वर्षीय समिर खनालको निध`न भएको हो।
खनाल र उनकी श्रीमती रुपा आगलागीमा परेर घा`इते भएका छन् । उनीहरुलाई उपचारका लागि पाल्पा रिफर गरिएको गाउँपालिका अध्य`क्ष खत्रीले जानकारी दिए । लकडाउनका कारण तीनै जना घरमा थिए । आगलागी सुरु हुनासाथ आमाबुवा बाहिर निस्कन सफल भएपछि समीर बाहिर नस`क्दा उनको ज्या`न गएको हो । आगला`गी सुरु हुनासाथ बुवा`आमा बाहिर निस्के तर छोरा सकेनन्, उनको ज्या`न गयो’ ख`त्रीले भने ।
खत्री`का अनुसार खाद्या`न्न र ग्यासको समेत पसल रहेको साढे दुई तलाको पक्की घर पूर्ण रूपमा क्ष`ति भएको छ। घरको भुइँ`तलामा रहेका समिरको घट`नास्थ`लमै नि`धन भएको छ भने उनका बुवाआमा दुवै जना घाइ`ते भएकोले उपचारको लागि पाल्पा मिसन अस्पतालमा पठाइएको अ`ध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिए। जेठो छोरा भने घरको माथिल्लो तलामा रहेको कारण छतबाट बाहिर हाम फालेर ज्यान जोगिएको अ`ध्यक्ष खत्रीले जानकारी दिए। एकैछिन अगाडी संगै बसेको छोरा घरमा आगलागी हुँदा तड्पि`र जले`को हेर्न बा`ध्य भए आमाबाबु । आगलागी कसरी भयो यसबारे आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए। आगलागीपछि ग्याँसको सिलिण्डर पड्किँ`दा घरमा बढी क्ष`ति भएको अ`ध्यक्ष ख`त्रीले जानकारी दिए।
खनाल परिवार शान्तिपुर बजारको घरमा पसल गर्थे । उनी बाग्लुङको बरेङ्ग गाउँपालिका ३ का वडध्य्क्ष` समेत रहेको खत्रीले जानकारी दिए । पसलबाट डिजल, पेट्रोलसमेत बिक्री गर्दै आएकाले आगो निभाउन समय लागेको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीको कारण खुल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीले पसलको सबै सामग्री जलेर न`ष्ट भएको छ।
हरेक नेपालीको खुन उमाल्ने भारतीय दादागिरीको यो तस्विरहरु !!
अझै एक साता लकडाउन बढाउन विज्ञहरुको सुझाव !